Ungayisebenzisa Kanjani i-Prestashop ye-SEO ekhuphukile nokuguqulwa | Martech Zone
Ukuqhuba ibhizinisi ngokusebenzisa isitolo esiku-inthanethi kuyinto ejwayelekile kulezi zinsuku ngezitolo ezingenakubalwa eziku-inthanethi ezigcwala i-Intanethi. I-Prestashop ubuchwepheshe obujwayelekile ngemuva kwamawebhusayithi amaningi anjalo.
I-Prestashop iyi-software yomthombo ovulekile ye-e-commerce. Cishe ama-250,000 (cishe u-0.5%) amawebhusayithi emhlabeni wonke asebenzisa i-Prestashop. Ukuba ubuchwepheshe obudumile, i-Prestashop inikeza izindlela eziningana lapho isayithi elakhiwe kusetshenziswa i-Prestashop lingenziwa khona ukuze likleliswe phezulu kusesho lwe-organic (SEO) nokuthola ukuguqulwa okuningi.
Inhloso yanoma iyiphi e-commerce isayithi ukuheha ithrafikhi nokuthola ukuthengisa okuningi. Lokhu kungafezwa ngokwandisa isiza se-SEO.
Nazi izindlela ezimbalwa lapho i-SEO ingenziwa khona kusayithi le-Prestashop:
Lungiselela ikhasi eliyisiqalo - Ikhasi lakho lasekhaya lifana nesitolo sakho sangaphambili ku-inthanethi. Ngakho-ke, akumele ihehe kuphela kepha futhi kufanele ikleliswe phezulu emiphumeleni yosesho. Ukuze wenze kanjalo, kufanele ufake okuqukethwe negama lakho elingukhiye elibaluleke kakhulu nemifanekiso esekhasini lakho eliyisiqalo. Okuqukethwe yikhasi lasekhaya nomkhiqizo wakho omkhulu akumele kushintshe kaningi ngoba injini yokusesha ayikwazi ukunquma ukuthi yini ebalulekile kuwe. Futhi, ikhasi lasekhaya kufanele lisheshe ukulayishwa, lingenaphutha, futhi linikeze ngomuzwa wokuphequlula omuhle.
Thola amagama akho angukhiye - Kubalulekile ukuthi unqume amagama akho angukhiye bese uvivinya ukusebenza kwawo usebenzisa ithuluzi lezikhangiso zeGoogle manje eliyingxenye yomhleli wegama elingukhiye. Ungathola ukuseshwa kwanyanga zonke nokwasendaweni, ukubaluleka, nokuncintisana kwamagama asemqoka. Amagama anomncintiswano omaphakathi nokuseshwa yiwona amagama abawasebenzisela kangcono amagama akho angukhiye. Elinye ithuluzi okufanele ulicabangele ngu Semrush yize kuyithuluzi lokukhokha.
Izixhumanisi zangaphandle - Ukuba nezixhumanisi ezivela kwamanye amasayithi kuya kusayithi lakho nakho kuyindlela ejwayelekile ye-SEO. Ungaxhumana nama-blogger nezindawo zokukhishwa kwabezindaba. Ama-Blogger angavuma ukubhala ngomkhiqizo wakho futhi anikeze isixhumanisi kusayithi lakho. Lokhu ngeke kusize ekwakheni izixhumanisi zangaphandle kepha futhi kuzokhulisa nethuba lokuthi isayithi lakho lihehe ithrafikhi evela kulezi zixhumanisi. Ungashicilela nokukhishwa kwakho emaphephandabeni esizeni ezahlukahlukene okuwumthombo omuhle wokuheha ithrafikhi esizeni sakho. Enye indlela yokuthola izixhumanisi zangaphandle ukubhala okuthunyelwe kwezivakashi. Ungathola ukuhanjiswa kusayithi lakho kulokhu okuthunyelwe. Enye indlela futhi ukucinga amasayithi asho isayithi lakho ngaphandle kokunikeza isixhumanisi. Ungabacela ukuthi bafake isixhumanisi esizeni sakho.
Gcwalisa lonke ulwazi lomkhiqizo oludingekayo - Gcwalisa zonke izinkambu ezidingekayo njengencazelo yomkhiqizo, izigaba, nabakhiqizi ngokuqukethwe koqobo. Lokhu kubalulekile ngombono we-SEO. Futhi, kufanele njalo uhlinzeke ngemininingwane ngezihloko ezilandelayo ze-meta, incazelo ye-meta, namalebula emeta kumashidi wolwazi womkhiqizo. Kufanele futhi unikeze nge-URL efanelekile.
Kufaka izinketho zokwabelana komphakathi - Ukuba nezinkinobho zokwabelana komphakathi kumawebhusayithi akho kuzosiza futhi. Lapho abantu babelana ngokuqukethwe kwakho nabangane babo, kwandisa amathuba okubadonsela kusayithi lakho. Ngale ndlela, ungathola amakhasimende amasha kuwebhusayithi yakho.
Khiqiza imephu yesayithi namarobhothi.txt - Imodyuli yemephu yesayithi ye-Google ikusiza ukuthi wakhe imephu yesayithi yakho futhi uyigcine ivuselelwa. Ifayela le-XML elibala yonke imikhiqizo yamasayithi namakhasi. Imephu yesayithi isetshenziselwa ukufaka izinkomba emakhasini ngakho-ke ibalulekile kusuka kumbono we-SEO. robots.txt ifayela elenziwa ngokuzenzakalela ku-Prestashop futhi lazisa abakhasi bezinjini zokusesha nezicabucabu ukuthi yiziphi izingxenye zesayithi le-Prestashop ezingazikhombi. Kuyasiza ekugcineni izinsiza zomkhawulokudonsa neziseva.
Ukuba nekhalenda lokuqukethwe nama-athikili anamagama asemqoka - Uma isayithi lakho linayo yonke imikhiqizo nganoma yisiphi isenzakalo esithile, lapho-ke ungashicilela izindatshana ngalezo zinsuku ezithile namanye amakhasi akhomba kuleli khasi. Ungabhala izindatshana kufaka phakathi amagama angukhiye ahambisana kakhulu nomcimbi. Kodwa-ke, umuntu akumele azame ukufaka amagama angukhiye amaningi kakhulu ku-athikili eyodwa ngoba lokhu kungadida injini yokusesha.
Iwebhusayithi esheshayo - Isayithi le-ecommerce elihamba kancane lingehlisa izinga lokuguqulwa, amazinga wokuthengisa nenjini yokusesha. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi iwebhusayithi ilayisha ngokushesha okukhulu. Ezinye iziphakamiso ezibalulekile zokuba newebhusayithi yokulayisha esheshayo yile:
Izithombe ezisezingeni eliphansi zinganciphisa iwebhusayithi ngakho-ke kubalulekile ukuthi izithombe zenzelwe ukulayishwa kwewebhusayithi ngokushesha.
Kufanele ususe wonke amamojula angafuneki njengoba ejwayele ukubamba ijubane lewebhusayithi. Amamojula we-Idle angabonwa ngosizo lokulungisa amaphutha kusuka kuphaneli ye-Prestashop.
Ukusetshenziswa kwe-CDN (Content Delivery Network) kuzosiza ukulayisha iwebhusayithi ngokushesha ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu ukusuka kuseva yokubamba.
Uhlelo lokulondolozwa kwesikhashana lwe-Prestashop noma olunikezwe izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni njenge-XCache, i-APC, noma iMemcached lungasetshenziswa ukusheshisa iwebhusayithi.
Inani le-cache yombuzo onconyiwe le-MySQL lingu-512 MB. Kufanele ucolisise inani uma lisebenza kabi.
I-Prestashop inikeza injini eyakhelwe ngaphakathi yokwenza ngcono izifanekiso ezibizwa nge-Smarty. Kungenziwa egcizelele ukusebenza kangcono.
Sebenzisa i-Schema.org - Ukumaka amaqhinga isiza ukuthuthukisa amawebhusayithi ngokwakha i-schema schema sedatha esihlelekile esibizwa nangokuthi amazwibela acebile. Ixhaswa yizo zonke izinjini ezinkulu zokusesha. Umaki we- “itemtype” usiza ukuhlukanisa ukuthi ngabe kukhona iwebhusayithi, isitolo esiku-inthanethi noma okunye okunye. Kuyasiza ukuhlinzeka umongo kumakhasi angaqondakali ngenye indlela.
Usebenzisa i-Google Analytics ne-Google Search Console - Kusetshenziswa iGoogle Analytics neGoogle Search Console kungafakwa kuwebhusayithi ngokufaka ikhodi kuwebhusayithi engabonakali kubavakashi bakho. I-Google Analytics inikeza imininingwane ewusizo mayelana nethrafikhi yewebhusayithi ngenkathi i-Google Search Console isiza ukuthola ukuthi iwebhusayithi ibalwa kangaki kumiphumela yosesho nedatha yokuchofoza
Susa amakhasi ayimpinda - Akuvamile ukuthi amakhasi aphindwe kabili aholele ku-Prestashop. Bane-URL efanayo enamapharamitha ahlukile. Lokhu kungagwenywa ngokuba nekhasi elilodwa noma ukusebenza kumgogodla we-Prestashop wesihloko esihlukile, incazelo ye-meta, ne-URL yekhasi ngalinye.
Sebenzisa ukuqondiswa kabusha lapho uthuthela kwelinye izwe - Uma uthuthela ku-Prestashop kusuka kwenye iwebhusayithi ungasebenzisa ukuqondisa kabusha okungu-301 unomphela ukwazisa i-Google nge-URL entsha. Ungasebenzisa futhi ithuluzi lokukhipha eliqondisa kabusha.
Isusa isichasiso se-URL - I-Prestashop 1.5 ingakhiqiza i-URL enezindlela zokukhuluma zaseSpain okuyisiphazamiso futhi edinga ukulungiswa.
Isusa omazisi - I-Prestashop igcizelela ekuhlanganiseni i-ID nemikhiqizo, imikhakha, umkhiqizi, umphakeli, nekhasi okuyisithiyo ku-SEO. Ngakho-ke, lawa ma-ID angasuswa ngokushintsha ingqikithi noma ngokuthenga imodyuli yokususa omazisi.
Ngaphezu kwalokho, i-Prestashop iphinde inikeze ngemodyuli ye-SEO engasiza kakhulu ekusingatheni yonke imisebenzi emikhulu ye-SEO. Inhloso yanoma yiliphi ibhizinisi ukuhola imali futhi lokho kungenzeka kuphela ngokuthola isikhundla esihle emiphumeleni yenjini yokusesha. I-Prestashop inikeza izindlela ezilula lapho i-SEO ingasetshenziswa khona ikwenze kube ukukhetha okusobala kwe-e-commerce.